माओवादी छाड्ने कर्मचारीसँग महेश बस्नेत मुड्की जुधाउने, बादल खादा ओढाउने ! - Kantipath.com
माओवादी छाड्ने कर्मचारीसँग महेश बस्नेत मुड्की जुधाउने, बादल खादा ओढाउने !
शनिबार बबरमहलमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आठौँ केन्द्रीय बैठक र राष्ट्रिय भेला आयोजना गरियो । बैठकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रामबहादुर थापा ‘बादल’, बहेश बस्नेतलगायत नेताहरु उपस्थित थिए ।
निजामती कर्मचारी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रम हेर्दा कुनै दलकै कार्यक्रम आयोजना गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो ।कार्यक्रम थियो, एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनको । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष अम्बिका धमलासहित एक सय जना केन्द्रीय सदस्य एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठनमा प्रवेश गरे ।
माओवादीबाट एमालेमा आएका कर्मचारीहरुलाई एमाले अध्यक्ष अ‍ोलीको उपस्थितिमा नेता बादलले खादा ओढाएका थिए । बादलभन्दा अगाडि रहेका महेश बस्नेतले भने माओवादी छाडेर एमालेमा आएकाहरुलाई अविर लगाउँदै मुड्की जुधाएका थिए ।
Previous Previous post: चुनावसम्म ओलीको कम्पनीमा पहिरो जान्छ : झाँक्री
Next Next post: अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा सुनीता बराल चयन
मान्छेको जिउमा सुँगुरको मृगौला हालेपछि….!
२०२२ मा पनि कोभिड महामारी कायमै रहन्छ : डब्लूएचओ
अनौठो जिव : भाले गर्भवती हुन्छ, एकै पटक २ हजार बच्चा जन्माउँछ !
विश्वभरिका खतरनाक रेस्लरहरु, सबैभन्दा धेरै कमाउने को ?
विश्वमा सबैभन्दा बढी अनौठो घटना हुने देश चीन, ‘ब्रा’सम्बन्धि अध्ययन गर्न डिग्रीसम्मको पढाई ?
महिनौंसम्म उठ्दैनन् सुतेका मानिस, वैज्ञानिक–डाक्टर हैरान
दिल्लीमा ‘आत्महत्या’ गरेकी महिला तीन दिनपछि बैंग्लोरमा जीवीत भेटिइन् !